Isiseko seZimbini zoMzila woLoliwe ohlukeneyo oza kubekwa eKayseri ngo-2020 | RayHaber | raillynews
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia38 KayseriIsiseko semizila emibini eyahlukeneyo yomgaqo kaloliwe iya kubekwa eKayseri ngo-2020
31 / 12 / 2019 38 Kayseri, Ummandla waseMntla Anatolia, railway, JIKELELE, KENTİÇİ Rail Systems, ZOMHLATHI, ETURKEY, tram
Isiseko semizila emibini eyahlukeneyo yomgaqo kaloliwe iya kubekwa kwi-kayseride
Usodolophu womasipala weDolophu yaseKayseri UMemduh Büyükkılıç, 2020 izakuba yenye yeminyaka ukumakisha ikamva likaKayseri, utshilo. USodolophu uBüyükkılıç, iKayseri ibaluleke kakhulu kungekuphela nje eyangoku kodwa kunye nekamva le projekthi liza kuqala ngo-2020, utshilo.
USodolophu kaMasipala weNqila UMemduh Büyü
USodolophu uBüyükkılıç wathi bazakufumana iziqhamo zomsebenzi owenziweyo ngonyaka ka-2019 ngonyaka ka-2020 wathi: em Siyaqhubeka nokuphakamisa ibar ngakumbi nangamava ethu kumasipala, ukuqonda kwethu ngonqulo, abasebenzi bethu abanobuchule kuyo yonke indawo nenkxaso esiyifumana kubemi bethu. Ngokubeka isiseko sezona projekthi zibalulekileyo kwimbali yeKayseri ngo-2020, siya kushiya imisebenzi ebalulekileyo siye eKayseri yekamva. Siza kubeka isiseko sePaki yoThengiso lweSixeko saseMoyeni ngo-1, eya kuba yenye yeepaki ezinkulu zelizwe lethu, hayi eKayseri kuphela, kodwa ubukhulu bayo bube zizigidi ezili-260 2020 zamawaka eemayile. Ukongeza, uMyezo wethu waseKocasinan Keykubat weSiti yeNdawo ubungakanani bezigidi ezili-1 zeekhilomitha ezili-100. Ngowama-2020 iya kuba ngunyaka wotyalo-mali obalulekileyo kwezothutho. Siza kubeka isiseko semizila emibini yendlela yoololiwe eyahlukeneyo ukuze indawo yokuhamba yoluntu ibe ntle ngakumbi. Isibhedlele saseBelsin-Isiphelo-SaseSixeko-i-Nuh Naci Yazgan University-Mobilyakent umzila wendlela yomgaqo kaloliwe uya kubanjwa ngexeshana elincinci kwaye ukwakhiwa komtya kuya kuqala ngentwasahlobo. Umgca weTalas-Anayurt ngokukhawuleza ngokwenza ithenda yalo mgca uza kuqala ukusebenzela isixeko sethu, utshilo.
UMemduh Büyükkılıç wathi isigaba sokuqala seProjekthi yokuTshintsha kweSahabiye Urban, esona projekthi sibaluleke kakhulu kwimbali yomasipala waseKayseri, siza kuziswa ngo-2020 kwaye amanye amabakala aya kuqhubeka ngokukhawuleza, iProjekthi yeTshintsho kwiDolophu yaseMosque iza kuqalwa kwaye utyalomali lukhawulezise eBydede. wathi utyalomali kunye neenkonzo zokusingqongileyo, inkcubeko, ubugcisa kunye nezemidlalo ziya kuqhubeka ngokukhawuleza. UMongameli Memduh Büyükkılıç, oomasipala bezithili besebenzisana neentliziyo ukuze basebenze ukufezekisa iimfuno zezithili bayaqhubeka nokusebenza, utshilo.
UKUBALULEKA KAKHULU KWENKONZO
Usodolophu uBüyükkılıç ugxininise ukuba ukubaluleka kokuncamathela kukhenketho ngonyaka ka-2019 kunye neenzame zabo kule ndlela ziya kuqhubeka nokukhula okukhawulezayo.Kenathi songeza iindawo ezintsha zokutsala kwisixeko sethu, sisebenzela ukuba sisixeko esingabheneli kuphela kwingingqi yethu kodwa kwilizwe liphela. Sicinga ukuba iKayseri mayibe yenye yeedolophu zokhenketho zehlabathi ezinamagugu alo. Ngale nto engqondweni, sathatha amanyathelo okuqala okhenketho. Iworkshop yoKhenketho lwezeMpilo kunye neentlanganiso zolwazi eziqhubekayo esasiqala ngazo neNkomfa yoKhenketho yezeMpilo ngo-2020 ziya kukhawulezisa. Ngokunjalo, ngendibano yokusebenzela iGastronomy apho sibeka khona ubutyebi bendlela yokutya yaseKayseri, imizamo yethu yokuqala kweli candelo iya kuthwalwa iye kwizinga eliphezulu ngo-2020. Unyaka ka-2020; ukhenketho lwebhaluni, ukhenketho lwenkcubeko kunye neemyuziyam ezintsha, ukhenketho lwezokholo, ukhenketho kwindalo iya kuba ngunyaka wophuhliso olubalulekileyo kwiindawo ezifana nezokhenketho. Ukongeza kuyo yonke le misebenzi, siza kuhambisa ii-Erciyes zethu, ezinendawo ekumgangatho ophezulu ski, kwinkonzo yoluntu ehlotyeni zineendawo zazo eziphakamileyo. ”
Diyarbakır-Mardin Junction - Bismil - Batman, Oyalı Junction - Silopi (Supply),…
Isiseko seNkqubo entsha yeThutho yeeTrogram ezobekwa eKayseri kulo nyaka
IsiSeko seProjekthi yeTrojethi ye-Speed ​​Speed ​​Training iya kugqitywa ekupheleni konyaka
Inkqubo yesitimela yokukhanya, i-tram system yahlukana | Kocaeli
I-EXPO Inkqubo Yendlela Yokwakhiwa Kwezithuthi
Ukuphazamiseka komzila wesitimela ku-Kocaeli
Ikhonkco lokugqibela le-Ankara-Istanbul High Speed ​​Line Line (YHT) yiKö
Antalya 3. Ukubeka iSiteyathelo seProjekthi yeeStranshini yeProgram
Isiseko se-Çamlıca i-cable car line iya kufakwa kwi-2016
Umgca weTocaeli umgca uya kulahlwa namhlanje
Isiseko seKöseköy-Gebze Line kwi-Speed ​​Speed ​​Train iya kwahlulwa kwi-27 ngoMatshi ngoLwesibili.
Edirne-Çerkezköy Umgca wokuPhumela oPhezulu uya kubeka emva koMthendeleko
3. Isiseko senqwelo-moya siya kufakwa kwi-2014
Utyalomali lwenkqubo yoololiwe iKayseri
Nxu lumene ngqo
Umyalezo woNyaka oMtsha ovela eTurhan, Umphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo